laacib » Kaddib Man City oo ku guuleysatay Premier League, waa kuwee kooxaha iyadoo kulamo badan harsan yihiin hantay horyaalka?
Kaddib Man City oo ku guuleysatay Premier League, waa kuwee kooxaha iyadoo kulamo badan harsan yihiin hantay horyaalka?
Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa ku guuleysatay caawa horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan 2017-18, kaddib markii laacibkii ku soo xigtay ee Man United ay guuldarro 1-0 kala kulantay West Brom.
Waa markii shanaad oo ay Manchester City qaato horyaalka Ingiriiska kaddib xilli ciyaareedyadii 1936–37, 1967–68, 2011–12, 2013–14.
Haddaba laacibkii ka dhisan Etihad ayaa xaqiijisay caawa inay ku guuleysatay horyaalka Premier League oo uu ka harsan yahay shan kulankan.
Waxaan halkaan hoose idin kula wadaageynaa kooxaha sida fudud ku qaaday horyaalka ama iyadoo kulamo badan harsan yihiin ku guuleystay horyaalka.
Kooxaha iyadoo kulamo badan harsan yihiin ku guuleystay horyaalka ayaa waxa ay kala yihiin labada Manchester ee Man United iyo Man City oo iyadoo shan kulan ka harsan yahay horyaalka xaqiijiyey inay qaadeen.
Man City ayaa xaqiijisay xilli ciyaareedkan 2017/18 hanashada horyaalka Premier League iyadoo horyaalka uu ka dhiman yahay shan kulan, si la mid ah Man United oo xilli ciyaareedkii 2000/01 xaqiijisay inay ku guuleysatay horyaalka iyadoo uu ka harsan yahay shan kulan.
Man City waxa ay caawa ku guuleysatay horyaalkeedii shanaad, halka Man United ay haysato 20 koob oo horyaalka Ingiriiska ah.